पाँच वर्षमा शैक्षिक संस्था पुनः निर्माणमा कति प्रगति ? - samayapost.com
पाँच वर्षमा शैक्षिक संस्था पुनः निर्माणमा कति प्रगति ?
समयपोष्ट २०७७ भदौ २९ गते १३:०२
विसं २०७२ वैशाख १२ गते शनिबार ११ बजेर ५६ मिनेटमा गएको शक्तिशाली भूकम्पले भत्काएका भौतिक संरचना प्रायः ठडिँदै छन् । पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको महामारीले अवरोध उत्पन्न गरेको भए पनि सरकारी भौतिक संरचना तथा सम्पदाको पुनर्निर्माणले केही समययतादेखि गति लिएको छ । नागरिकका व्यक्तिगत संरचना अथवा घर पनि पहिलेको अवस्थामा आउनेक्रम जारी नै छ ।
तलब नपाएपछि आन्दोलनमा उत्रिए शिक्षक
पठनपाठन खुलाउन आवश्यक तयारी सुरु, भट्टाभट् विद्यार्थी भर्ना लिईदैँ